Garaad Bashiir Buu Ahaaye, Kulmiye Maxaa Meesha Keenay? - Jigjiga Online
HomeSomalidaGaraad Bashiir Buu Ahaaye, Kulmiye Maxaa Meesha Keenay?
Garaad Bashiir Buu Ahaaye, Kulmiye Maxaa Meesha Keenay?
Jigjiga (JO) – Dhallinyarada deegaanka Soomaalida ayaa cambaareeyey aflagaado loo geystay Garaad Bashiir Garaad Axmed Makhtal, taas oo ay ku tilmaameen arrin fool xun oo ka baxsan dhaqanka Soomaaliyeed iyo Midka Islaamnimada oo markii ugu horreysay deegaanka uu ka bilaabay Madaxweynihii hore ee Cabdi Ilay, haddana uu Mustafe isticmaalayo.
Qoraal ay dhallinyarada reer Jigjiga soo gaadhsiiyeen Jigjiga Online ayaa waxay ku sheegeen in Garaadka la aflagaadeeyey aanu ahayn Garaad Kulmiye ee uu yahay Garaad Bashiir, waxaanay usoo jeediyeen dhallinyarada magaaladaas in aan la marin-habaabin ee ay iska fahmaan shirqool laga soo maleegay Madaxtooyada oo la iskaga hor keenayo bulshada.
Bayaanka oo dhamaystiran halkan ka akhriso:
“Waxaan si kulul u dhaleecaynaynaa cayda iyo aflgaada loo geystay Garaad Bashiir Makhtal. Waa dhaqan xun oo laga dhaxlay dawladii Cabdi Iley, ta maanta joogtana ay sii laban laabtay.
Waxaa sidoo kale aad u dhaleecaynayaa wax laga yaq-yaqsadana ah in xukuumada iyo taageerayaasheedu isku dayayaan in ay u sawiraan in la af lagaadeeyay Garaad Kulmiye.
Mustafe hadii uu rabo in uu Garaad Kulmiye aflagaadeeyo, waxba yuuna ku soo dhuumanin ee si toos ah ha u sheego.
Waxaa sidoo kale wax aan la aqbali karin ah, in Musatafe uu meel uga dhaco caqliga iyo garashada bulshada. Ma waxa uu noo haystaa inaanu nahay kuwa aan kala ogayn cida cayda iyo cida aflagaadaysa.
Ma waxa uu noo haystaa inuu colaad been ah la gelin karo?
Ujeedada dhabta ah ee ka dambaysa been abuurkan ayaa ah in Garaad Kulmiye uu si toos ah uga biyo diiday qudhunka iyo qabyaalada Mustafe, si cadna u diiday in uu qayb ka noqdo odayadii koofid-baclayaasha ahaa ee uu Addis Ababa u diray inay difaacaan.
Mustafe isaga oo taas ka cadhaysan ayuu fursad u arkay inuu waxa uu meelahaas ka dhaho, toos ugu dhaho qof kale ayaa yidhi?
Af-lagaadoodiyinka joogtada ah ee aad ku hayso Garaadka in badan ayaan kaa aamusnay, balse maanta lagaa yeeli maayo.”
CUDURRADA FAAFA Iyo SOONKA: Taariikhda cudurradii safmarka ahaa ee saameeyay cibaadada bisha Ramadaan